Creme21 Body Lotion - Normal Skin (250ml) | Buy online | SHOP.COM.MM
Creme21 Body Lotion - Normal Skin (250ml)
Body Lotion - Normal Skin (250ml)
အသားအရေ ပျက်ဆီးမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
Sold by ZTradex Co. Ltd.
သာမန်အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်သူများအတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။ အသားအရေ စိုပြေ၀င်းမွတ်စေတယ်၊ အသားအရေ ပျက်ဆီးမှုကို ကာကွယ်ပေးတယ်၊ ရနံ့လည်း သင်းပျံ့လို့ လိမ်းလို့ကောင်းတယ် Read more Hide
Creme21 Body lotion အရမ်းကောင်းတယ်။ ရာသီမရွေးကိုသုံးလို့ရတော့ကြိုက်တယ်။ ဆောင်းတွင်းဆိုလည်း အသားမခြောက်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။ နွေဆိုလည်း နေမလောင်အောင်၊ မိုးဆိုလည်းအသားမခြောက်၊ အသားမပတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ အနံ့လေးကလည်းသင်းသင်းလေး။ Read more Hide
Htet Thazin Soe
ဒီ ဘော်ဒီလိုးရှင်းက ဈေးတန်ပြီး အကြာကြီးလည်း သုံးရပါတယ်။ စေးကပ်မှုလည်း မရှိပါဘူး။ Read more Hide
အနံ့လေးကအရမ်းကောင်းလို့ သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ အသားအရေကို စိုပြေတင်းရင်းစေပြီး နူးညံ့လှပစေပါတယ်။ Read more Hide
Creme 21 Body Lotion
ဒီ Body Lotion လေး စေးကပ်မှုမရှိဘဲ အသားအရေကို စိုပြေလန်းဆန်းစေလို့ အမြဲသုံးတယ်။ Read more Hide
I have found this Creme 21 product to be FANTASTIC. It healed my dry cracked elbow area. I highly recommend this product. Read more Hide
Creme 21 Skin Care
Creme 21 isaGerman brand skincare products originally created by Henkel. During the 1970s, Creme 21 was present in various markets internationally. During this time, the way in which cosmetics and skincare products were marketed and sold to consumers changed. Cosmetics and skincare products were originally just sold by specialist retailers, such as chemists and department stores. Creme 21 is exported toahuge number of foreign markets nowadays.
သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Skin Care များ
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး skin care များကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
အောင်မြင်နေသော Creme 21 ၏ skin care နယ်ပယ်အတွင်းတွင် ခရင်မ်နှင့် body lotions များသာမက လတ်ဆတ်စေသော shower gels များနှင့် sun protection များကိုလည်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Creme 21 သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အရေပြားအသားအရေပုံစံအမျိုးမျိုးတို့၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် အာရုံထားပြီး ထိုလိုအပ်ချက်များအတိုင်း Creme 21 သည် အထူးပြုထုတ်လုပ်ထားသော skin care product များဖြင့် ထုတ်လုပ်လာပါတယ်။ Body Lotions များ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းအပေါ် ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ သင့်အရေပြားအသားအရေအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်များနှင့် ဆန္ဒရှိတောင့်တသည်များကို အထူးအားဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကို စဉ်ဆက်မပြတ် အကောင်အထည်ဖော်ထုတ်လုပ်နေပြီး အဆက်မပြတ် တိုးမြှင့်လာနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ခေတ်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်လုပ်လာခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုခံစားရင်း သင့်အသားအရေအား အကောင်းဆုံး take care ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
The Creme 21 Body Lotion isaskin care becomesapleasure! Creme 21 Body Lotion isavaluable moisturizing milk for normal skin. Since it is enriched with provitamin B5, ensures your skin intense feeling of moisture and make it smoother, softer and smoother. Creme 21 Body Lotion treats skin and protects and preserves the natural moisture balance. It quickly penetrates the skin and in the long term will ensure the necessary moisture without leaving an unpleasant film. With typical cheerful and fresh scent of Creme 21! Good tolerance Creme 21 Body Lotion has been dermatologically confirmed.
Specifications of Body Lotion - Normal Skin (250ml)